ओलीले भने- माधव नेपाल उत्तर कोरिया गएको थाहा छैन
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको विादास्पद उत्तर कोरिया भ्रमणबारे तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। पार्टीको औपचारिक जानकारीविना व्यक्तिगत हैसियतमा नेता नेपालले उत्तर कोरियाको भ्रमण गरेको बताउँदै ओलीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। यो खबर आजको अन्नपूर्णमा टिकाराम यात्रीले लिएको अन्तर्वार्ताबाट लिएका हौ।
पार्टीको संस्थागत निर्णयबाटै माधवकुमार नेपाललाई पठाउनुभएको हो भन्ने प्रश्नमा ओलीले माधव नेपालजी उत्तर कोरिया जानुभो । त्यो उहाँको व्यक्तिगत भ्रमण हो । त्यसमा पार्टी जवाफदेही नहुने बताए।
यस्तै तपाई कहीं न कहीं घोचपेचजन्य र अरूलाई कटाक्ष गर्नुहुन्छ, त्यस्तो अभिव्यक्ति नगरे हुँदैन? भन्ने प्रश्नमा उनले यस्तो जवाफ दिए।
यस्तै तपाईं भारतमा जाँदा राम्रो आतिथ्यता भयो, तर संयुक्त विज्ञप्ति जारी भएन । के कारणले होला? भनि सोधिएको प्रश्नमा उनको जवाफ थियो-
ओलीसँगको पुरा अन्तर्वार्ता आजको अन्नपूर्णमा हेर्नुहोला
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भदौ २३, २०७४, ०५:१३:३३